af-Soomaali | pegasus
Lagu magacaabo waa kuwa da'doodu tahay 15­-25, gay, bisexual, trans iyo / ama isku ijnsiga ah oo ay leeyihiin fikrado ku saabsan galmada bixinta.
Lix hab maroorsi ah in aad hesho wax beddelkeeda galmada. Magdhowga waxaa laga yaabaa, tusaale ahaan lacag, khamriga, daroogada, hurdada, dhar ama safarka. Sex ka mid noqon kara galmada siilka ama futada, galmada afka, galmada si ay isu caddeeyaan in webcam ama diraya images galmada naftooda qof
Wadaankaan ma aha sharci daro in galmo iyo si ay u helaan magdhaw, waxaa ka. Marna waa kan aqbala magdhow lix kan wax sharci daro ah samayn. Waa qofka siinayaa ama bixiyaa magdhow lix kan wax sharci daro ah samayn. Waxaad mar walba xaq u leedahay inaad tiraahdo maya galmada. Xitaa haddii aad ku heshiiyeen inay, ama ku heshiiyeen in ay galmo, waxaad xaq u leedahay in aad bedesho maanka ama joojin, ka hor iyo inta lagu jiro galmada labada. Waxaad tahay muhiim ah oo aad xaq u leedahay inaad dareento wanaagsan galmada aad leedahay.
Waxaad xaq u leedahay in aad tijaabiso idin xorayn ee HIV iyo STDs badan iyo STDs badan ayaa sidoo kale daawaynta iyo dawo lacag la'aan ah. Waxaa muhiim ah in aad si joogto ah u baaro, maxaa yeelay, HIV iyo STDs ma had iyo jeer soo saaraan calaamadaha. Waqtiga baaritaanka, waxaa muhiim ah inaad u sheegto sida aad galmo maxaa yeelay STDs noqon kartaa meelo kala duwan ee jirka (ee qoorta, on / in xubnaha taranka ama dabada). Waxaad adigu tijaabin kartaa rugta dhalinyarada ama xarunta caafimaadka.
Iyo pegasus.se kuwiinna 15­25 sano, dadka LGBTQ iyo fikiro ku saabsan galmada, waayo, gunnadooda, in si qarsoodi ah lagu sheekeysto nala in English ama Swedish. Bogga internetka waxaa maamula RFSL Youth, taas oo ah Youth xuquuqda LGBT. Waxaan maqli oo annagu ma xukumi. Waxaan halkaan idiin.